के प्रियंका चोपडा सम्बन्धबिच्छेदको तयारीमा छिन् , के भन्छिन् आमा मधु ? - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
के प्रियंका चोपडा सम्बन्धबिच्छेदको तयारीमा छिन् , के भन्छिन् आमा मधु ?
तीन वर्ष पहिले बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा आफूभन्दा ११ वर्ष कान्छो युवकसाग विहे गरेर चर्चामा आएकी थिइन् । उनले अमेरिकी गायक निक जोनससँग विहे गरिन् ।तीन वर्षपछि उनीहरुको सम्बन्धका बारेमा पछिल्लो समय बलिउडसँगै हलिउडमासमेत चर्चामा हुन थालेको छ ।
प्रियंका र निक बलिउडसँगै हलिउडमासमेत चर्चित जोडीमा पर्छन् । अहिले उनीहरु चर्चामा आउनुको कारण भनेको अलिक फरक रहेको छ । उनीहरुले तीन वर्षपछि अलग हुन लागेको कुरा बाहिर आएको हो ।सोमबार प्रियंका चोपडाले आफ्नो इन्स्टाग्राम अकाउन्टको बायो एकाएक परिवर्तन गरेपछि विभिन्न खाले अड्कलबाजी हुन थालेका हुन् ।
उनले बायोबाट निकको सरनेम जोनस हटाएकी छिन् । उनले पति निक जोनसको साथसाथै आफ्नै सरनेम चोपडा पनि निकालेकी हुन् ।प्रियंकाले आफ्नो बायोबाट जोनस हटाएपछि सम्बन्धविच्छेद त भएको होइन भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न अड्कलबाजी हुन थाल्यो । कतिपय सञ्चारमाध्यमहरुले उनीहरूबीच डिर्भोसनै हुन लागेकोसमेत बताए ।
केहीले निकको परिवारले उनलाई प्रियंकासँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न सल्लाह दिएकोसमेत उल्लेख गरेका छन् । तर यो सबै कुराहरुलाई प्रियंकाकी आमा मधु चोपडाले मित्थ्या भनेकी छिन् ।आफ्नी छोरीले सम्बन्धविच्छेद गर्न लागेको भन्ने कुरामा सत्यता नभएको उनको भनाई रहेका छ ।
प्रियंकाकी आमा मधु चोपडाले पनि उनीहरुको सम्बन्धविच्छेदको खबरलाई अफवाह भनेकी छिन् । उनले यस्ता झुटा समाचार नफैलाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।